| Launcher ကို APK ကိုအခမဲ့ GO အန်းဒရွိုက်သည် APK ကိုဒေါင်းလုပ် (နောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်း)
ပင်မစာမျက်နှာ » launchers » Launcher ကို GO
Launcher ကို APK ကို GO
Launcher ကို GO
2018 နယူး Themes ဆိုက်ရောက်ဗီဇာ - Launcher ကို GO!- ထို Go ကိုတင်ပေးသူအပေါ်အင်္ဂါရပ်များပါဝင်သည်:
အဓိကအကြောင်းအရာ GO: android များအတွက် 10000 + အခမဲ့မိုဘိုင်း themes များပေး
Wallpaper Go: အလှတရား, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်နှင့်လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှအကြီးအရှုခင်းအပါအဝင် HD ကိုနောက်ခံပုံများအမျိုးမျိုးအမြိုးမြိုး, ကိုအပ်ဒိတ်လုပ်
√ေူပာင်းလဲရေး Effect: 20 + screen နဲ့အံဆွဲကာတွန်းဆိုးကျိုးများ
√ Widget လေး: မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်ဝစ်ဂျက်ကို, ရှာဝစ်ဂျက်ကို, ဝစ်ဂျက်များနှင့် 2018 ပြက္ခဒိန်ဝစ်ဂျက် switches
√ Apps စီမံခန့်ခွဲမှု: ဖုန်းကိုလုံခြုံရေးကာကွယ်ပေးရန် Hide & Lock ကို Apps
√ဒေါက်တာသန့်ရှင်း: သင်၏ဖုန်းကိုမြန်နှုန်း Boost
သငျသညျ GO Launcher ကိုအတွက် launcher themes များ, icon များ, HD ကိုနောက်ခံပုံများ & ဝစ်ဂျက်ကိုရှာဖွေ, သင်၏ပင်မမျက်နှာပြင်, menu နဲ့ 3D သက်ရောက်မှုနှင့်အတူပင်သော့ခတ်မျက်နှာပြင် interface ကိုစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်။
2018 မိုဘိုင်း themes များနှင့်အတူ 10000 မိမိစိတ်ကြိုက် App ကို
Launcher ကို Z ကိုသင်တို့အဘို့ 10000 လှပသောမိုဘိုင်း themes များထက်ပိုမိုထောက်ပံ့ထားတဲ့ Android ဖုန်းများအတွက်စတိုင် & စိတ်ကြိုက် application ကိုဖြစ်ပါသည် GO ။ ကျနော်တို့ဒါပေါ်မှာကြယ် anime, ဂိမ်း, ကာတွန်းနှင့်အပါအဝင်အပတ်တိုင်းစတိုင်များအမျိုးမျိုးနှင့်အတူပေါများစတိုင် launcher themes များဖန်တီးသောသူပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဒီဇိုင်နာ, ရှိသည်။ မျက်နှာပြင် 3D သက်ရောက်မှု, App ကို Widgets & 100000 အခမဲ့ HD နောက်ခံပုံများကျော်သင်သည်သင်၏ပင်မမျက်နှာပြင်, menu နဲ့သော့ခတ်မျက်နှာပြင်ကိုစိတ်ကြိုက်ရန်အဘို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ။
သင့်မိုဘိုင်းဖုန်းရဲ့ launcher App ကို Cool
လွတ်လပ်သောဖွံ့ဖြိုး 3D အင်ဂျင်နှင့်အတူ, GO Launcher ကိုသူတို့ရဲ့ဘဝနှင့်အလုပ်အတွက် Android ကိုမိုဘိုင်းဖုန်းကိုအသုံးပြုဖို့သူအအသုံးပြုသူကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးလက်တွဲဖော်ဖြစ်လာထံအပ်နှံ, ရိုးရှင်းသောချောမွေ့ခြင်းနှင့်ကြောက်မက်ဘွယ် 3D သက်ရောက်မှုနှင့်အတူအလွန်အစာရှောင်ခြင်းနှင့်လုံခြုံတဲ့ operating အတွေ့အကြုံကိုအားဖြင့်သင်တို့ကိုပေးပါသည်။
DIY Themer သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဓာတ်ပုံနှင့်အိုင်ကွန်နှင့်အတူသင့်ကိုယ်ပိုင် themes များဒီဇိုင်းကူညီပေးပါမည်သည့်အသုံးဝင်သော tool ကိုဖြစ်ပါတယ်။ GO Launcher ကိုသင့်ရဲ့ Android ဖုန်းကိုပိုမိုစတိုင်နှင့်ပိုပြီးစိတ်ကြိုက်စေသည်ပါလိမ့်မယ်။
ဒါဟာ GO Launcher ကို Z ကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီး Go ကိုတင်ပေးသူထံမှဟာ android themes များရဲ့အကောင်းဆုံးပုံစံဒီဇိုင်းကိုတွေ့ကြုံခံစားဖို့အချိန်ပဲ! ငါတို့သည်သင်တို့ GO Theme Store မှာ android များအတွက်သင်အကြိုက်ဆုံး launcher themes များတွေ့ပါလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ပါသည်။
Launcher ကိုသင့်ရဲ့ထောက်ခံမှုဖှံ့ဖွိုးတိုးတမောင်းနှင်ထားပြီးနက်ရှိုင်းစွာယုံကြည်စိတ်ချဖြစ်ပါတယ် GO ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ app ထဲတွင်အခြို့သောမြင်ကွင်းများမှာပြထားတဲ့ကြော်ငြာအကြောင်းအရာရှိပါလိမ့်မယ်။ ပိုပြီးအသေးစိတ်အတွက် m.facebook.com/ads/ad_choices သွားရောက်ကြည့်ရှု။
gomo.com: ကြှနျုပျတို့၏ website သွားရောက်ကြည့်ရှု
Launcher ကို GO - 3D Parallax Themes & HD ကိုနောက်ခံများ
26.85 ကို MB
Launcher ကို S ကို GO - ...
ဦး Launcher ကို Lite ကို - ...
X ကိုဖွင့်တင်အခမဲ့ ...
ME တင်ပေးသူ - ...
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 6, 2018 မှာ 10: 44 ညနေ
ငါသည်ဤ apk ကိုကြိုက် ... Pls download လုပ်ပါနှင့်ပျော်မွေ့ ????????????????????????